Archive du 20200526
Midina ny fahefa-mividin’ny valalabemandry. Maro rahateo ireo very asa vokatr’izao krizy izao.
Taombaovan’Imerina 2020 Nangadihady ny kianja teny Anosimanjaka
Tontosa tamin’ny sabotsy faha-23 mey ny fanamarihana ny taombaovaon’Imerina 2020 ho an’ny Zanadranavalona Anosimanjaka. Araka ny toromariky ny filohan'ny fikambanana, tsy nisy ny hetsika firavoravoana an-kalamanjana hankalazana ny taona 445 teny Anosimanjaka .
Fahamasinan’i Madagasikara Natao fitaovana politika fotsiny ?
Heno matetika tao anatin’ny fampielezan-kevitry ny filoham-pirenena ankehitriny,
Hikaon-doha ireo tompon'andraikitra eny Atsimondrano Mahatratra 900 000 ny isan’ny mponina ao anatin’ny distrikan’Atsimondrano amin’izao, miparitaka amina kaominina miisa 26.
Fanafihana teny Alakamisy Fenoarivo Jiolahy 3 azo sambo-belona
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Mpivarotra mpambongady iray indray omaly maraina tokony ho tamin’ny 07 ora sy sasany teny Alakamisy Fenoarivo no nitafihina jiolahy miisa efatra nitondra moto.
Raharaha fampijaliana an’i Speranto Hitory ny talem-paritry ny mponina any SAVA
Tonga nijery ifotony an’i Speranto kely ny talem-paritry ny mponina any SAVA, taorian’ny vaovao niely mikasika ny fampijaliana nahazo azy nanomboka tamin’iny herinandro iny.
Vehivavy hita faty tao Fianarantsoa Mbola tsy fantatra ny antony
Vehivavy iray no hita faty teny Antarandolo, fiantsonana fiara mpitatitra iray ao Fianarantsoa, afak'omaly.
Vola fisotron-dronono Afaka alaina eny amin’ny Paositra Money
Manomboka ny volana Jona ho avy izao dia efa afaka alaina eny amin’ny Paositra Money ny vola fisotron-dronono.
Alakamisy Fenoarivo Nisy lehilahy iray voan’ny Covid 19
Raikitra ny fanadiovana sy famendrahana ranom-panafody iadiana amin’ny aretina coronavirus omaly teny Alakamisy Fenoarivo, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Dokotera maty tany Toamasina Mety hitombina ny famonoan-tena, hoy ny zandary
Nisy ny fidinana ifotony tany amin’ny Hopitaly Manara-penitra nataon’ny zandarimariam-pirenena notarihin’ny Kaomandy ambony Jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa.
Ady amin` ny Coronavirus Izay vao manomboka !
Tsy midika akory fa tsy nisy ny ezaka nandritra izay roa volana nametrahana ny fahamehana ara-pahasalamana teto amin` ny firenena noho ny valanaretina Covid-19 saingy izao vao tena manomboka!